डोनाल्ड ट्रम्प यी कारणले फेरि राष्ट्रपति हुन सक्छन् « Kathmandu Pati
डोनाल्ड ट्रम्प यी कारणले फेरि राष्ट्रपति हुन सक्छन्
एजेन्सी – अमेरिकामा श्रम दिवस सेप्टेम्बरको पहिलो सोमबार चार बर्षमा एक पटक मनाइन्छ । यो ह्वाइट हाउसका लागि नयाँ राष्ट्रपति छनौट गर्ने दौडको अन्तिम चरण हो, जुन चुनावी अभियान चलरहेको छ ।
फेरि राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी हुन ट्रम्प केही हप्ता पहिलेको तुलनामा अहिले बलियो स्थितिमा देखिएका छन् । अगस्ट महिनाको सुरूमा डेमोक्र्याटिक नेताहरू बिडेन जो चुनावी दौडमा थिए । तर पछिल्लो १० दिनमा उनको सक्रियतामा केही कमी आएको छ ।
फाइभअर्थ वेबसाइटका अनुसार बिडेनको वृद्धिमा दुई बिन्दुले गिरावट आएको छ ।
वर्तमानमा यो प्रवृत्ति ट्रम्पको पक्षमा रहेको बताउन निकै हतार हुन्छ तर, यदि तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ कि ट्रम्पले हालसालै लिएका कदमहरू मानिसहरूले मन पराएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूकाअनुसार यी कारणले संकेत गर्दछ कि ट्रम्प फेरि राष्ट्रपति बन्न सक्दछः
१. ट्रम्पका समर्थकमा उत्साह
अमेरिकामा मतदान गर्नु अनिवार्य छैन र त्यसैले यहाँको परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्दछ ।
यस्तो अवस्थामा नेताहरुको काम यहाँ सम्भावित मतदाताहरुलाई लुक्नका लागि मात्र सीमित छैन, बरु उनीहरुलाई बाहिर जान र भोट हाल्न प्रेरित गर्न पनि छ ।
अमेरिकामा चुनाव मंगलबार हुन्छ, अर्थात् कामको दिनमा मतदाताको धैर्यता हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
२०२० विगतका वर्षहरू भन्दा फरक छ, किनकि यो आफुलाई भोट दिन विश्वस्त पार्न मात्र होइन, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम थाहा पाएर जोखिम लिन पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा तपाईको अर्को प्रतिनिधि छनौट गर्न अधिकार प्रयोग गर्नु कुनै मामूली कुरा होइन । र यस कारणले गर्दा मतदाताहरुलाई बारम्बार सोधिन्छ कि तिनीहरू चुनावको लागि उत्साहित छन् कि छैनन् ?
यस अवस्थामा ट्रम्प समर्थकहरू बिडेन समर्थकहरू भन्दा एक कदम अगाडी छन् ।
२. ट्रम्प आफैले भने ‘बाहिरी व्यक्ति’
अलाबामाको डाफ्नेका निवासी रबर्ट लीड्स भन्छन्, ‘२०१६ भन्द्या अगाडि मैले कहिले पनि तमदान गरेको थिइनँ र म पनि राजनीतिमा चासो राख्दिन । तर ट्रम्पको आगमनपछि मैले महसुस गरे कि तिनीहरू फरक थिए । म आफ्नो जीवनमा पहिलो थिएँ । एकचोटि मतदान गरियो र उनीहरूलाई समर्थन गरें । यदि मैले मौका पाए भने, म तिनीहरूलाई फेरि मतदान गर्नेछु ।’
२०१६ मा ट्रम्पले यस क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।
ट्रम्प चार बर्षका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति छन, तर अझै उनी आफैलाई एक बाहिरी मान्छे भन्छन् । जबकि केही व्यक्तिहरू ट्रम्पले परम्परागत राजनैतिक सर्कलहरू छुट्याउन सक्षम भएको विश्वास गर्दछन्, धेरैले विश्वास गर्छन् कि उनले धेरै काम गर्न सकेनन् ।
लीड्स भन्छन्, ‘उहाँ एक व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई के गर्ने थाहा छ । मलाई थाहा छ कि हिलारीको साथ मेरो जीवन खराब भएको थियो ।’
रिपब्लिकन पार्टीको अधिवेशन राष्ट्रपति ट्रम्पको वरपर थियो, डेमोक्र्याटिक पार्टीको अधिवेशनमा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिन्टन र जिम्मी कार्टर जस्ता प्रमुख व्यक्तिहरू थिए ।
एकातिर, जहाँ ट्रम्पले आफूलाई बाह्य मानिसका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, अर्कोतर्फ, आफ्नो अभियानमा बिदेनलाई नबनाउन अपिल गर्दै आएका छन् ।
उनले भने, ‘बिडेन विगत ४० वषैदेखि नेताको रूपमा काम गर्दै आएका छन, सिनेटमा छ पटक निर्वाचित भइसकेका छन र आठ बर्षसम्म उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका छन । राजनीतिमा यति लामो समय बितिसके पनि बिडेनले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक विरासत सिर्जना गर्न सकेका छैनन् ।’
३. चुनावमा इन्टरनेटको प्रयोग
टेक्नोलोजीको विषयमा न्यूयोर्क टाइम्समा केभिन रसले यस्तो चेतावनी दिएका छन्, ‘सुन्नुहोस्, उदारवादी हो, यदि तपाईलाई लाग्छ कि ट्रम्प फेरि निर्वाचित हुनेछैनन् भने फेसबुकमा बढी समय खर्च गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।’
उनका अनुसार फेसबुकमा दैनिक कम्तिमा १० लोकप्रिय पोष्टहरू छन् जुन रिपब्लिक पार्टी, कन्जर्भेटिभ पार्टी र ट्रम्प समर्थकहरूका बारेमा छन् ।
‘उनीसँग फेसबुकमा ‘मौन बहुमत’ हुन सक्छ, जसले ट्रम्पलाई नोभेम्बरमा विजयी तुल्याउने छ । यदि तपाईं ट्विटरको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यसो भएका मतदातासँग सीधा कुरा गर्न यो एक राम्रो तरिका मानिन्छ’, रसले भनेका छन्, ‘यहाँ ट्रम्प आफ्नै शैलीमा उपस्थित छन्, ट्विटरमा उनी आफ्ना विरोधीहरूका बारेमा बोल्छन्, मिडियालाई तानेका छन् र आफ्नो राजनैतिक प्रचार गर्छन् ।’
बिडेनका बारेमा कुरा गर्दा, उनका अनुयायीहरू ट्रम्पको भन्दा दश गुणा कम छन् । उनीहरू यस मञ्चमा मतदाताहरूसँग सम्पर्क बढाउन कोशिश गर्दैछन्, तर तिनीहरू केही मुद्दामा मात्र लेख्छन् ।
हालसालै त्यस्ता समाचारहरू सोशल मिडियामा पनि भइरहेको छ, जसमा भनिएको, ‘कि ट्रम्प नेता हुनुहुन्छ जसले सारा संसार बचाउनुहुन्छ ।’
यस्ता भाइरल सन्देशहरूले मतदातालाई कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने ठोस रूपमा भन्न सकिदैन, तर यो अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि चुनावी रणभूमिमा इन्टरनेट एकदम महत्त्वपूर्ण हतियार बनेको छ ।
त्यहाँ अर्को कुरा छ, जो फेरि राष्ट्रपति पदको दौडमा ट्रम्पको पक्षमा जान्छ र त्यो हो सरकारी मेसिनरीको पकड ।
हाल ट्रम्पको सन्दर्भमा यसको सम्बन्ध कोरोना भाइरस खोप उत्पादन गर्नका लागि भएका प्रयासहरु अझै तीव्र पार्नु हो । उनले अर्थव्यवस्थामा आपतकालिन सहयोग पुर्‍याउन चाहिरहेका छन् जुन महामारीको कारण कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।